ကိုဗစ် ၁၉ ကြောင့် ပြောင်းလဲရတော့မယ့် စာသင်ကြားမှု - THIT HTOO LWIN (Daily News) '; summ = summary_img; } var summary = imgtag + '
ကိုဗစ် ၁၉ ကြောင့် ပြောင်းလဲရတော့မယ့် စာသင်ကြားမှု
ကျောင်းသားတွေ ကတော့ ကျောင်းဖွင့်ရက် မျှော်နေကြ
နှစ်စဉ် နှစ်တိုင်း ဒီလိုအချိန် မေလ ဆိုရင်တော့ ရန်ကုန်မြို့မှာဆိုရင် ဗိုလ်ချုပ်ဈေး၊ သိမ်ကြီးဈေး စတာတွေမှာ မိဘတွေဟာ ခြေချင်းလိမ်မတတ် ကျောင်းဝတ်စုံ နဲ့ ကျောင်းပစ္စည်းတွေ ရှာဝယ်နေရပြီဖြစ်ပါတယ်။
ဒီနှစ်ကတော့ မိဘအများစုအတွက် မေးခွန်းကတော့ ကျောင်းကိုလွှတ်ရမှာလား .. အင်တာနက်ကနေ စာသင်ရမှာလား ဆိုတဲ့ မေးခွန်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
လာမယ့် မေလ ၁၅ ရက်နေ့အထိ လူစုလူဝေးမလုပ်ဖို့၊ မလိုအပ်ဘဲ အပြင်မသွားဖို့ စတဲ့ အစိုးရရဲ့ ကိုဗစ် ၁၉ ထိန်းချုပ်ရေးစီမံချက် ကတော့ ရှိနေဆဲပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
တကယ်လို့များ ကျောင်းဖွင့်ရာသီ ဇွန်လမှာ ကျောင်းတွေ ပြန်မဖွင့်နိုင်သေးဘူးဆိုရင်တော့ အွန်လိုင်းကနေ သင်ကြား ပို့ချမှုတွေ လုပ်ဖို့ စီစဉ်နေတယ်လို့ သမ္မတရုံး ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိ သူ ဦးဇော်ဌေး က မေလ၁ရက်နေ့ ပြုလုပ်တဲ့ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာ ပြောခဲ့ပါတယ်။
ကျောင်းသားတွေ နောက်နှစ် ကစပြီး မတ်လကုန် အထိ ကျောင်းတက် ရမယ်
ကျေးရွာတွေက စာသင်ခန်းတွေက အွန်လိုင် ကသင်နိုင်ပါ့မလား
အစိုးရကျောင်းမှာ တက်ရောက် သင်ကြားနေတဲ့ တောင်ဥက္ကလာမြို့နယ်က Grade4ကျောင်းသား မိဘတစ်ဦးဖြစ်သူ မခင်ဇာဇာကတော့ အွန်လိုင်းနဲ့ စာသင်ဖို့ဆိုတာ နည်းပညာ အခက်အခဲတွေ ရှိနေနိုင်တဲ့ အပြင် ငွေကြေး မတတ်နိုင်သူ သာမန် လက်လုပ်လက်စားတွေအတွက် အဆင်မပြေ နိုင်ဘူးလို့ ဆိုပါတယ်။
"အွန်လိုင်းပညာရေးစနစ်က မကောင်းဘူးလားဆိုတော့ ကောင်းတယ်။ ဒါပေမယ့် သူတို့ သင်ကြားရမယ့် နည်းပညာက အခက်အခဲဖြစ်လာရင် အိမ်က လူတွေက ကူညီနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ နောက် လူတိုင်းကလည်း ဒီကွန်ပျူတာတွေ အင်တာနက်တွေနဲ့ လက်လှမ်းမီမှာ မဟုတ်ဘူး " လို့ သူ့အမြင်ကို ပြောပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံ စီးပွားရေး နဲ့ လူတန်းစား အနေအထားအရလည်း အခြေခံလူတန်းစား များပြားတဲ့ နယ်မြို့ရွာတွေမှာ အင်တာနက်နဲ့ အလှမ်းဝေးနေသေးတာကြောင့် အိုင်တီနည်းပညာ မှာ အခက်အခဲတွေ အများကြီး ဖြစ်လာနိုင်သလို အွန်လိုင်း စာသင်ခန်းကို ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်ဖို့လည်း မဖြစ်နိုင်သေးဘူးလို့ ပညာရေး လေ့လာနေသူတွေက မှတ်ချက်ချပါတယ်။
လက်ရှိ အခြေအနေမှာတော့ တက္ကသိုလ်ဝင်တန်း အဖြေလွှာစစ်ဆေးမှုတွေအပြင် ၊ စတုတ္ထတန်းနဲ့ အဋ္ဌမ တန်း စာသင်နှစ်တွေရဲ့ အဖြေလွှာစစ်ဆေးမှုတွေကလည်း မပြီးသေးတဲ့အတွက် လာမယ့် ကျောင်းဖွင့်မယ့် ကာလကို အတိအကျ မပြောနိုင်သေးဘူးလို့ အခြေခံပညာ ဦးစီးဌာန ၊ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးကိုလေးဝင်း ဆိုပါတယ်။
မြန်မာ့ပညာရေးရုပ်သံလိုင်းကို မေလ ၄ ရက်နေ့ ကစပြီး စမ်းသပ်နေ
မြန်မာနိုင်ငံမှာ အခြေခံပညာဦးစီးဌာနရဲ့ လက်အောက်မှာ ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနက ပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့ သင်ရိုးကို လိုက်နာသင်ယူနေတဲ့ ဘုန်းတော်ကြီးသင် စာသင်ကျောင်း၊ ကိုယ်ပိုင်ကျောင်းတွေနဲ့ အစိုးရက ဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ ကျောင်းတွေမှာ ကျောင်းသားအအရေအတွက် ၉ . ၇ သန်းရှိတယ်လို့ ဦးကိုလေးဝင်းက ဆိုပါတယ်။
ဒီကျောင်းသား ၉ .၇ သန်းလုံးအတွက် အွန်လိုင်းစာသင်ခန်းနဲ့ မဖြစ်နိုင်တာကြောင့် ကျောင်းဖွင့်ခွင့်တွေပေးမယ် ဆိုရင်တောင် ကိုဗစ် ၁၉ ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးအတွက် ကျောင်းသားနဲ့ ဆရာ ဆရာမတိုင်း မဖြစ်မနေ မျက်နှာဖုံးအကာအကွယ်တပ်တာတွေ၊ ကျောင်းတွေမှာ လက်ဆေးတဲ့ နေရာတွေ ထားပေးတာတွေ အပြင်၊ တစ်ချို့ ကျောင်းတွေမှာ လူဦးရေ များတဲ့အတွက် ကျောင်းချိန် နှစ်သုတ် ခွဲပြီး တက်ဖို့တွေ အထိ ပြင်ဆင် စဉ်းစားထားတွေ ရှိကြောင်း ဦးကိုလေးဝင်းက ဘီဘီစီကို ပြောပါတယ်။
ကိုဗစ် ၁၉ ကြောင့် ပြောင်းလဲရတော့မယ့် စာသင်ကြားမှု စနစ်ကြားမှာ နိုင်ငံတကာ ပညာရေးစနစ်တွေကို အခြေခံ ထားတဲ့ နိုင်ငံတကာ ကျောင်းတွေမှာ သားသမီးတွေကို ကျောင်းထားတဲ့ မိဘတွေလည်း အပါအဝင် ဖြစ်ပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံက နိုင်ငံတကာကျောင်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ ILBC ကျောင်းကတော့ Home Base Learning အစီအစဉ်နဲ့ ၂၀၂၀ - ၂၀၂၁ ပညာသင်နှစ်ကို စတင်ဖို့ သူတို့ ရဲ့ တရားဝင် အင်တာနက် စာမျက်နှာကနေ ထုတ်ပြန်ထားခဲ့ပါတယ်။
မေလ ၁၈ ရက်နေ့ကနေ ၂၉ ရက်နေ့အထိကို စာရင်းပေးသွင်းထားတဲ့ ကျောင်းသားတွေကို အွန်လိုင်းကနေ အခမဲ့ စတင်သင်ကြားမယ်လို့ ကြေညာထားကြောင်း ILBC က ကျောင်းသား မိဘတွေက ဆိုပါတယ်။
ကလေးတွေရဲ့ သင်ကြားနိုင်မှု စွမ်းရည်အပေါ်မှာ မိဘတွေက ပူပန်နေကြ
ILBC မှာ တက်ရောက်သင်ကြားနေတဲ့ Grade3ကျောင်းသူ မိခင်တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ မဖြူဖြူကတော့ "ကိုယ်က အဆင်ပြေပေမယ့် မပြေသူတွေအတွက် စိတ်မကောင်းဘူး။ ခုတောင် laptop ဝယ်ထားပေးရပြီလေ ။ သူ့ကို ဒီအတိုင်းလည်း လွှတ်ထားလို့မရဘူး ၊ ဥပမာ မီးပျက်သွားရင် ဘာလုပ်မလဲ လေ့ ကျင့်ခန်းတွေကို ဘယ်လို ပြန်ပို့ မလည်း စတာတွေပါ့ "လို့ အခက်အခဲကို ပြောပြပါတယ်။
အခက်အခဲမျိုးစုံတွေထဲကမှ အဓိက ကျောင်းသားမိဘတွေ ထောက်ပြတဲ့ အချက်တွေကတော့ နည်းပညာအခက်အခဲ၊ လျှပ်စစ်မီးအခက်အခဲ၊ သင်ကြားမှု အထောက်အကူပြုပစ္စည်းများ အခက်အခဲတွေအပြင် ကလေးတွေရဲ့ သင်ကြားနိုင်မှု စွမ်းရည်အပေါ်မှာ မိဘတွေက ပူပန်နေကြတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကြောင့်လည်း အစိုးရကျောင်းတွေသာမက နိုင်ငံတကာ ကျောင်းထားတဲ့ မိဘတွေကြားမှာလည်း အွန်လိုင်း သင်ကြားမှု စနစ်အပေါ် အငြင်းပွားမှုတွေက ရှိနေကြပါတယ်။
ကိုဗစ်ကာလကြောင့် အတန်းမတက်နိုင်သူတွေ ၊ ဆက်တိုက် ပညာမသင်ကြားနိုင်သူတွေ ကျန်ခဲ့တာဖြစ်လာမယ့် သဘောမှာရှိပြီး ဒီလို မညီမျှမှုတွေက နှစ်နှစ်ဆက်တိုက် ဖြစ်နေမယ့် ကိုဗစ်အလွန် မြန်မာ့ပညာရေး စိန်ခေါ်ချက်ပဲ ဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ ကျောင်းသားမိဘတစ်ဦးကမှတ်ချက်ပြုခဲ့ပါတယ်။
မိဘတွေကြားမှာလည်း အွန်လိုင်း သင်ကြားမှု စနစ်အပေါ် အငြင်းပွားမှုတွေရှိ
တောင်ဥက္ကလာမြို့နယ်က Grade4ကျောင်းသား မိဘတစ်ဦးဖြစ်သူ မခင်ဇာဇာကတော့ သူ့ ကလေးကို အွန်လိုင်းအင်တာနက် ကသင်တာထက်ကျောင်းတက်စေချင်တယ်လို့ ပြောပါတယ်။
ကျောင်းတက်မယ်ဆိုရင်တော့ မဖြစ်မနေ နှာခေါင်းစည်း ဝတ်ရတော့မယ်၊ လက်ဆေးဖို့ လက်ဆေးရည်တွေ ဝယ်စုထားတယ်။ ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ မျက်နှာကို ဖလင်ပြားတွေနဲ့လုပ်တဲ့ အကာ လေးတွေ ပါဝယ်ပေးရမယ်လို့သူကပြောပါတယ်။
"ကျမတို့လို အခြေခံ လူတန်းစားအတွက်ကတော့ အတတ်နိုင်ဆုံး ကိုယ့်သားသမီးကို ကာကွယ်ပေးပီးကျောင်းလွှတ်ရမှာပဲ"မခင်ဇာဇာကပြောပါတယ်။
နှဈစဉျ နှဈတိုငျး ဒီလိုအခြိနျ မလေ ဆိုရငျတော့ ရနျကုနျမွို့မှာဆိုရငျ ဗိုလျခြုပျဈေး၊ သိမျကွီးဈေး စတာတှမှော မိဘတှဟော ခွခေငျြးလိမျမတတျ ကြောငျးဝတျစုံ နဲ့ ကြောငျးပစ်စညျးတှေ ရှာဝယျနရေပွီဖွဈပါတယျ။
ဒီနှဈကတော့ မိဘအမြားစုအတှကျ မေးခှနျးကတော့ ကြောငျးကိုလှတျရမှာလား .. အငျတာနကျကနေ စာသငျရမှာလား ဆိုတဲ့ မေးခှနျးပဲ ဖွဈပါတယျ။
လာမယျ့ မလေ ၁၅ ရကျနအေ့ထိ လူစုလူဝေးမလုပျဖို့၊ မလိုအပျဘဲ အပွငျမသှားဖို့ စတဲ့ အစိုးရရဲ့ ကိုဗဈ ၁၉ ထိနျးခြုပျရေးစီမံခကျြ ကတော့ ရှိနဆေဲပဲ ဖွဈပါတယျ။
တကယျလို့မြား ကြောငျးဖှငျ့ရာသီ ဇှနျလမှာ ကြောငျးတှေ ပွနျမဖှငျ့နိုငျသေးဘူးဆိုရငျတော့ အှနျလိုငျးကနေ သငျကွား ပို့ခမြှုတှေ လုပျဖို့ စီစဉျနတေယျလို့ သမ်မတရုံး ပွောရေးဆိုခှငျ့ရှိ သူ ဦးဇျောဌေး က မလေ၁ရကျနေ့ ပွုလုပျတဲ့ သတငျးစာရှငျးလငျးပှဲမှာ ပွောခဲ့ပါတယျ။
ကြောငျးသားတှေ နောကျနှဈ ကစပွီး မတျလကုနျ အထိ ကြောငျးတကျ ရမယျ
အစိုးရကြောငျးမှာ တကျရောကျ သငျကွားနတေဲ့ တောငျဥက်ကလာမွို့နယျက Grade4ကြောငျးသား မိဘတဈဦးဖွဈသူ မခငျဇာဇာကတော့ အှနျလိုငျးနဲ့ စာသငျဖို့ဆိုတာ နညျးပညာ အခကျအခဲတှေ ရှိနနေိုငျတဲ့ အပွငျ ငှကွေေး မတတျနိုငျသူ သာမနျ လကျလုပျလကျစားတှအေတှကျ အဆငျမပွေ နိုငျဘူးလို့ ဆိုပါတယျ။
"အှနျလိုငျးပညာရေးစနဈက မကောငျးဘူးလားဆိုတော့ ကောငျးတယျ။ ဒါပမေယျ့ သူတို့ သငျကွားရမယျ့ နညျးပညာက အခကျအခဲဖွဈလာရငျ အိမျက လူတှကေ ကူညီနိုငျမှာမဟုတျဘူး။ နောကျ လူတိုငျးကလညျး ဒီကှနျပြူတာတှေ အငျတာနကျတှနေဲ့ လကျလှမျးမီမှာ မဟုတျဘူး " လို့ သူ့အမွငျကို ပွောပါတယျ။
မွနျမာနိုငျငံ စီးပှားရေး နဲ့ လူတနျးစား အနအေထားအရလညျး အခွခေံလူတနျးစား မြားပွားတဲ့ နယျမွို့ရှာတှမှော အငျတာနကျနဲ့ အလှမျးဝေးနသေေးတာကွောငျ့ အိုငျတီနညျးပညာ မှာ အခကျအခဲတှေ အမြားကွီး ဖွဈလာနိုငျသလို အှနျလိုငျး စာသငျခနျးကို ရငျးနှီးကြှမျးဝငျဖို့လညျး မဖွဈနိုငျသေးဘူးလို့ ပညာရေး လလေ့ာနသေူတှကေ မှတျခကျြခပြါတယျ။
လကျရှိ အခွအေနမှောတော့ တက်ကသိုလျဝငျတနျး အဖွလှောစဈဆေးမှုတှအေပွငျ ၊ စတုတ်ထတနျးနဲ့ အဋ်ဌမ တနျး စာသငျနှဈတှရေဲ့ အဖွလှောစဈဆေးမှုတှကေလညျး မပွီးသေးတဲ့အတှကျ လာမယျ့ ကြောငျးဖှငျ့မယျ့ ကာလကို အတိအကြ မပွောနိုငျသေးဘူးလို့ အခွခေံပညာ ဦးစီးဌာန ၊ညှနျကွားရေးမှူးခြုပျ ဦးကိုလေးဝငျး ဆိုပါတယျ။
မွနျမာနိုငျငံမှာ အခွခေံပညာဦးစီးဌာနရဲ့ လကျအောကျမှာ ပညာရေးဝနျကွီးဌာနက ပွဋ်ဌာနျးထားတဲ့ သငျရိုးကို လိုကျနာသငျယူနတေဲ့ ဘုနျးတျောကွီးသငျ စာသငျကြောငျး၊ ကိုယျပိုငျကြောငျးတှနေဲ့ အစိုးရက ဖှငျ့လှဈထားတဲ့ ကြောငျးတှမှော ကြောငျးသားအအရအေတှကျ ၉ . ၇ သနျးရှိတယျလို့ ဦးကိုလေးဝငျးက ဆိုပါတယျ။
ဒီကြောငျးသား ၉ .၇ သနျးလုံးအတှကျ အှနျလိုငျးစာသငျခနျးနဲ့ မဖွဈနိုငျတာကွောငျ့ ကြောငျးဖှငျ့ခှငျ့တှပေေးမယျ ဆိုရငျတောငျ ကိုဗဈ ၁၉ ကွိုတငျကာကှယျရေးအတှကျ ကြောငျးသားနဲ့ ဆရာ ဆရာမတိုငျး မဖွဈမနေ မကျြနှာဖုံးအကာအကှယျတပျတာတှေ၊ ကြောငျးတှမှော လကျဆေးတဲ့ နရောတှေ ထားပေးတာတှေ အပွငျ၊ တဈခြို့ ကြောငျးတှမှော လူဦးရေ မြားတဲ့အတှကျ ကြောငျးခြိနျ နှဈသုတျ ခှဲပွီး တကျဖို့တှေ အထိ ပွငျဆငျ စဉျးစားထားတှေ ရှိကွောငျး ဦးကိုလေးဝငျးက ဘီဘီစီကို ပွောပါတယျ။
ကိုဗဈ ၁၉ ကွောငျ့ ပွောငျးလဲရတော့မယျ့ စာသငျကွားမှု စနဈကွားမှာ နိုငျငံတကာ ပညာရေးစနဈတှကေို အခွခေံ ထားတဲ့ နိုငျငံတကာ ကြောငျးတှမှော သားသမီးတှကေို ကြောငျးထားတဲ့ မိဘတှလေညျး အပါအဝငျ ဖွဈပါတယျ။
မွနျမာနိုငျငံက နိုငျငံတကာကြောငျးတဈခုဖွဈတဲ့ ILBC ကြောငျးကတော့ Home Base Learning အစီအစဉျနဲ့ ၂၀၂၀ - ၂၀၂၁ ပညာသငျနှဈကို စတငျဖို့ သူတို့ ရဲ့ တရားဝငျ အငျတာနကျ စာမကျြနှာကနေ ထုတျပွနျထားခဲ့ပါတယျ။
မလေ ၁၈ ရကျနကေ့နေ ၂၉ ရကျနအေ့ထိကို စာရငျးပေးသှငျးထားတဲ့ ကြောငျးသားတှကေို အှနျလိုငျးကနေ အခမဲ့ စတငျသငျကွားမယျလို့ ကွညောထားကွောငျး ILBC က ကြောငျးသား မိဘတှကေ ဆိုပါတယျ။
ILBC မှာ တကျရောကျသငျကွားနတေဲ့ Grade3ကြောငျးသူ မိခငျတဈဦးဖွဈတဲ့ မဖွူဖွူကတော့ "ကိုယျက အဆငျပွပေမေယျ့ မပွသေူတှအေတှကျ စိတျမကောငျးဘူး။ ခုတောငျ laptop ဝယျထားပေးရပွီလေ ။ သူ့ကို ဒီအတိုငျးလညျး လှတျထားလို့မရဘူး ၊ ဥပမာ မီးပကျြသှားရငျ ဘာလုပျမလဲ လေ့ ကငျြ့ခနျးတှကေို ဘယျလို ပွနျပို့ မလညျး စတာတှပေါ့ "လို့ အခကျအခဲကို ပွောပွပါတယျ။
အခကျအခဲမြိုးစုံတှထေဲကမှ အဓိက ကြောငျးသားမိဘတှေ ထောကျပွတဲ့ အခကျြတှကေတော့ နညျးပညာအခကျအခဲ၊ လြှပျစဈမီးအခကျအခဲ၊ သငျကွားမှု အထောကျအကူပွုပစ်စညျးမြား အခကျအခဲတှအေပွငျ ကလေးတှရေဲ့ သငျကွားနိုငျမှု စှမျးရညျအပျေါမှာ မိဘတှကေ ပူပနျနကွေတာလညျး ဖွဈပါတယျ။
ဒါကွောငျ့လညျး အစိုးရကြောငျးတှသောမက နိုငျငံတကာ ကြောငျးထားတဲ့ မိဘတှကွေားမှာလညျး အှနျလိုငျး သငျကွားမှု စနဈအပျေါ အငွငျးပှားမှုတှကေ ရှိနကွေပါတယျ။
ကိုဗဈကာလကွောငျ့ အတနျးမတကျနိုငျသူတှေ ၊ ဆကျတိုကျ ပညာမသငျကွားနိုငျသူတှေ ကနျြခဲ့တာဖွဈလာမယျ့ သဘောမှာရှိပွီး ဒီလို မညီမြှမှုတှကေ နှဈနှဈဆကျတိုကျ ဖွဈနမေယျ့ ကိုဗဈအလှနျ မွနျမာ့ပညာရေး စိနျချေါခကျြပဲ ဖွဈလာနိုငျတယျလို့ ကြောငျးသားမိဘတဈဦးကမှတျခကျြပွုခဲ့ပါတယျ။
တောငျဥက်ကလာမွို့နယျက Grade4ကြောငျးသား မိဘတဈဦးဖွဈသူ မခငျဇာဇာကတော့ သူ့ ကလေးကို အှနျလိုငျးအငျတာနကျ ကသငျတာထကျကြောငျးတကျစခေငျြတယျလို့ ပွောပါတယျ။
ကြောငျးတကျမယျဆိုရငျတော့ မဖွဈမနေ နှာခေါငျးစညျး ဝတျရတော့မယျ၊ လကျဆေးဖို့ လကျဆေးရညျတှေ ဝယျစုထားတယျ။ ဖွဈနိုငျမယျဆိုရငျတော့ မကျြနှာကို ဖလငျပွားတှနေဲ့လုပျတဲ့ အကာ လေးတှေ ပါဝယျပေးရမယျလို့သူကပွောပါတယျ။
"ကမြတို့လို အခွခေံ လူတနျးစားအတှကျကတော့ အတတျနိုငျဆုံး ကိုယျ့သားသမီးကို ကာကှယျပေးပီးကြောငျးလှတျရမှာပဲ"မခငျဇာဇာကပွောပါတယျ။